Mealy igirigi | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Mealy igirigi
Ihe na-akpata ọganihu nke clematis na mkpochapụ ha
Ugboro ugboro, na-akụ ihe ọkụkụ, ị na-atụ anya na ha ga-amatị ​​ma jiri anya ha hụ. Ma, mgbe ụfọdụ, ọ na-eme na osisi ahụ malitere imerụ ahụ. N'okwu a, ị gaghị ahụ okooko osisi ọ bụla ma ọ bụ akwụkwọ ọkụ dị mma. Edere isiokwu a iji nyere clematis aka, nke gburu "ọrịa". Anyị ga-enyocha ihe mere ndị ụkọchukwu ji etolite, ihe ha ga-eme ma ọ bụrụ na osisi ahụ na-arịa ọrịa nje, esi chebe ohia site na ntu oyi na ọtụtụ ndị ọzọ.
Mgbe ọ dịkarịa ala otu violet pụtara n'ụlọ gị, dịrị njikere maka eziokwu ahụ na ọrịa na ụdị pests dị iche iche ga-ebute ya. Ma ntakịrị ihe na-aga n'ihu, anyị chọrọ ikwu na ụzọ isi gbochie nke a bụ ihe mgbochi mgbe niile. Ya mere, ị nweta osisi ọhụrụ, a ghaghị ịnọ na ya iche na osisi ndị ọzọ ma hụ na ọ dị mma.
Gini mere ị gaghị eto hydrangea, bụ isi ọrịa nke ifuru
Ahia hydrangea nwere ike ịme ụlọ ọ bụla ma ọ bụ window sill, mana ịma mma a niile nwere ike ibute ọrịa ụfọdụ mgbe ụfọdụ. N'ime ogige na ọrịa ime ụlọ na-adịghị adị iche, ya mere, n'okpuru ebe a ka anyị ga-amụ n'ụzọ zuru ezu otú e si agwọ hydrangea, n'agbanyeghị ụdị ya na ebe ọ na-akụ.
Atụmatụ nke ịkụ na ịchekwa daisies na ụlọ okpomọkụ ha
Egwu dị iche iche bụ okooko osisi ndị na-adọrọ adọrọ, ịkụ ihe na nlekọta ọzọ, na mmeputakwa anaghị eme mgbalị dị ukwuu. Iji na-eto ha n'ala na-emeghe, ịkwesighi ihe ọmụma na nkà pụrụ iche, na ụdị di iche iche varietal ga-amasị ọbụna ihe kachasị ngwa ngwa ngwa ore. Kedu ihe ị ga-ahụ n'anya, ọnọdụ kachasị mma maka ifuru na-eto eto Ọ bụrụ na ị bụghị otu n'ime ndị na-achọ ka ọ bụghị naanị na-atụgharị uche na daisies na foto, ma na-akụ ha n'ubi gị, mgbe mbụ ị ga-ekpebi ebe.
Ọrịa ọrịa tomato na ụzọ ha si emeso ha
E nwere ọtụtụ ọrịa na tomato. Ịmata ha ga-aba uru nye ndị niile na-eto eto tomato ka ha nwee ike ịmị mma, ike, na mmesapụ aka. Taa, anyị na-ele ọrịa ọrịa ndị kachasị na-ahụkarị nke ị nwere ike izute. Ọrịa nje bacteria: mgbaàmà, usoro nchịkwa Ihe kpatara ọrịa nje bacteria na tomato dị iche iche, nke na-eduga ná ọnwụ nke osisi, iji belata n 'mkpụrụ ha na àgwà tomato.
Esi tufuo powdery mildew na goozberị, wepụ ntụ ọcha site na osisi ahụ
Na-emekarị goozberị bushes nke na-eto eto n'otu ebe ruo ogologo oge, powdery mildew anya ma ọ bụ mgbe e mesịrị emetụta. Ọ bụghị onye ọ bụla na-elekọta ubi ga-ekpebi ịkwatu osisi dị otú a, karịsịa ma ọ bụrụ na ọ bụ ụdị dịgasị iche ma dị ụtọ. Ya mere, ajụjụ a bụ otu esi tufuo powdery mildew. E nwere ọtụtụ ụzọ dị iche iche ị ga-esi merie ero a.
Asters: ọrịa na pests, soro ha
Ọtụtụ ndị na-akọ ubi na-akụ na atụmatụ ha mara mma ma ọ bụ osisi herbaceous kwa afọ - asters. E nwere ihe karịrị ụdị 500. A na-akụ ndị Asters n'osisi akwa, jiri ha mee ihe maka ala, rabatok, iji chọọ ihu igwe ma ọ bụ ebe obibi, ichikota ọmarịcha nri na ndozi fatịlaịza. Ma, ọ dị mwute ikwu na ịma mma a nile nwere ike imeri site na ọrịa nke asters, nke ihe karịrị otu onye na-elekọta ubi.
Otu esi emeso ma gbochie oria nke kabeeji
Ugbo nile a kporo ubi, tinyere kabeeji, nwere ike ibute oria. Ọ dị mfe karị iji mepụta mgbochi megide ịmịnye ha nsogbu karịa ịgwọ ndị a zụrụ. Ọzọkwa, a pụghị ịgwọ ụfọdụ n'ime ha. Ọrịa nje bacteria na ọgwụ nje nke kabeeji: mgbaàmà na ụzọ nchịkwa Ihe oriri nile nke kabeeji dị n'elu ala, ya mere, ịgwọ ọgwụ ndị na-egbu egbu iji gbuo ọrịa nke kabeeji bụ imerụ ahụ ike ha.
Esi emeso phlox n'ụlọ
Phlox - ezigbo mma nke ubi ọ bụla. Esi ísì, okpukpu dị iche iche nke onyinyo dị iche iche ga-enwe obi ụtọ ndị nwe ha n'oge okpomọkụ. Osisi ndị a adịghị achọ nlekọta pụrụ iche ruo mgbe ha na-arịa ọrịa. N'ụzọ dị mwute, phloxes na-arịa ọrịa, dịka ndị mmadụ. Ha anaghị adịkwa mfe mgbe nile (karịsịa ma ọ bụrụ na a chọpụtaghị ihe mgbaàmà mbụ nke ọrịa ahụ na oge).
Atụmatụ kacha mma maka nlekọta na akuku viburnum Buldenezh
Kalina Buldenezh (ya na French "Boulede Snow" - snow globe) - osisi osisi, ụdị viburnum na nnukwu, snowball-dị ka inflorescences. Osisi ahụ na-ewu ewu na ndị na-elekọta ubi, n'agbanyeghị eziokwu na ọ naghị amị mkpụrụ. Njirimara na àgwà nke viburnum Buldenezh Nke a dịgasị iche iche a na-akpọ sterile viburnum, n'ihi na ya okooko osisi bụ ada.
Otú e si emeso ọrịa nke ube
Ihe mgbaru ọsọ nke ndị ọ bụla na-elekọta ubi bụ ọgaranya nke mkpụrụ osisi. Otú ọ dị, iji mee ka ọ dị gị mkpa ka ị na-elekọta osisi ndị na-amị mkpụrụ, na-etinye aka na ngbochi na ịgwọ ọrịa. Ihe ize ndụ ndị na-echere osisi dị ọtụtụ. Ube nwere ike ibute ọrịa dị iche iche. Mgbe ị gụsịrị isiokwu a, ị ga-amụ banyere ọrịa ndị na-arịakarị ube, banyere ụzọ ha si egbochi na ọgwụgwọ.
Olee otú iji na-emeso ọrịa na pests viola
Viola (pansies) - otu n'ime osisi ndị kachasị mma na akwa akwa na ọhụụ, ọtụtụ ndị na-elekọta ubi. Ọ bụ nke ezinụlọ violet. Ejikwa ya maka ihe ndozi, balconies, arbors. Ị ma? Ndị Gris oge ochie na ndị Rom ji ụlọ viola mma n'oge ezumike na n'oge nri abalị.
Esi gwọọ osisi apụl site na ọrịa, ụzọ dị irè
Na-eto eto osisi apụl dị na mba dị nnọọ mfe karịa ka ọ nwere ike iyi ka ọ na-ele ya anya. Iji na-ewe ezigbo owuwe ihe ubi, ọ dị mkpa iji na-elekọta mkpụrụ osisi, ịmata ụdị ọrịa apụl na ọgwụgwọ ha. Ọ bụ banyere ọrịa nke apụl osisi, akwụkwọ ha na usoro ọgwụgwọ ga-atụle na ihe a. Ị ma?
Otú e si emeri ọrịa ndị na-efe efe
Ọ bụrụ na osisi ubi gị kụrụ aka na ọrịa dị iche iche, enwela obi nkoropụ ma kwụsị owuwe ihe ubi ahụ. Ọtụtụ ọrịa anaghị esi ike imeri. I kwesiri ijide onwe gi n'inwe ndidi, nkwenye sitere n'aka ndi oru ugbo na ndi ogwu na-achikota ihe ndi nwere ike zoputa na ulo ndi okachamara kacha nso.
Nnukwu pests na ọrịa na nke ugu
Ugu anyị na-akpọ ihe oriri nwere agba odo odo. Osisi ahụ sitere na South America, ọ bụ ezie na na mba anyị, dabere na ọnọdụ nsị na iche iche, mkpụrụ osisi pumpkin nwere ike iru mita 1 n'obosara, nwere oke ihe karịrị kilogram 200. A na-eri osisi pulp na ọbụna ugu dị ka ihe oriri, ma akpụkpọ anụ nke ihe oriri na-atụfu ya, n'ihi na ọ dị oke, ike na enweghị mmasị.
Ngwá ọrịa ọrịa
Dill bụ osisi kwa afọ ruo 125 cm elu, ebe osisi ahụ dị ncha, akwụkwọ ndị dị mkpa bụ nke a na-atụgharị, ọtụtụ okooko osisi na-acha odo odo na-etolite ụbụrụ dị mgbagwoju anya, na-etolite, na-etolite oval mkpụrụ osisi aja - mkpụrụ. Dill bụ osisi na-adịghị mma, ma ọrịa dị iche iche na-emetụtakarị ya na-egbochi onye na-elekọta ubi ka ọ ghara inweta ezigbo mkpụrụ nke elu ala.
Otú e si emeso ọrịa radish
Radish na-ezo aka n'oge ndị na-eto eto na-eto eto bụ ndị ọrịa na-adịghị ahụkarị. Otú ọ dị, ọ ka na-eme. Ugbo ugbo na ugbo kwesiri ekwesighi izere otutu n'ime ha. N'isiokwu a, anyị ga-ekwu banyere ihe ịrịba ama na usoro nke ịlụso ọrịa nke radish ọgụ. Ihe oriri a nwere ike imeri ma nje ma patịgenic dịkwa ka usoro.
Ọrịa willow na pests na njikwa ha dị irè
N'ime ọhịa, e nwere ihe dị ka ụdị willows 600. Ha na-abịa n'ụdị nke osisi na osisi, ogologo ma ogologo, na-enwe ụdị akwụkwọ dị iche iche na agba agba. Na omenala, e nwere ọtụtụ ụdị na ụdị. Ha niile nwere ike iyi egwu site na nnukwu ọnụọgụ ọrịa na pests. Banyere ndị kasị dị ize ndụ n'ime ha ị ga-amụta site na isiokwu a.
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na eriri akwa tụkwasịrị na orchid
Maka onye ọ bụla na-elekọta ubi, na-agbanwe ọdịdị nke okooko osisi toro eto bụ ezigbo ihe mere ị ga-eji chebara ahụike ha echiche. N'otu ụzọ ahụ na orchid, ụmụ irighiri mmiri dị iche iche pụtara na epupụta - anyị na-achọ ozugbo. Ekwesiri ighota na onu a aputaghi igosi mkpa ichota osisi ahu, mana enweghi ike wepu ya.
Otú e si emeso powdery mildew na Roses
Mmiri Mealy bụ otu n'ime ọrịa ndị kachasị mma na ọrịa na-adịghị mma nke nnukwu osisi na-ata ahụhụ. Ọ dị oke mkpa ịlụso ya ọgụ, n'ihi na ihe kpatara ọrịa ahụ a na-eleghara anya bụ ọnwụ nke osisi ahụ. Nke kachasị njọ mgbe ọrịa ahụ na-ebibi ịma mma nke osisi ornamental. N'isiokwu a, anyị chọrọ ịkọrọ ndị mmadụ gbasara otu esi egbochie powdery mildew na Roses na ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ọ kụrụ okooko.